N’ABALỊ atọ n’ọnwa Ọktoba afọ 2015, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania nwere nnọkọ ha na-enwe kwa afọ. Ná nnọkọ ahụ, Nwanna Anthony Morris, onye so n’Òtù Na-achị Isi kwuru na a ga-enwe ọmụmụ ihe ọhụrụ a na-akpọ Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ. Ọ ga anọchi ọmụmụ ihe Ụlọ Akwụkwọ Ije Ozi Ọchịchị Chineke, Nzukọ Ije Ozi na Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ. O kwukwara na a ga-agbanwe Ozi Alaeze Anyị ma jiri akwụkwọ mara mma dị peeji asatọ aha ya bụ Usoro Ihe Omume​—⁠Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ dochie ya. A ga na-ebipụta ya kwa ọnwa. A ga-ede ihe ndị a ga amụ n’ọmụmụ ihe n’izu ọ bụla na ya. Ọ ga-ebukwa ihe osise ndị mara mma ndị ga-eme ka ịgụ Baịbụl na-atọkwu gị ụtọ.
E kere ọmụmụ ihe ọhụrụ a ụzọ atọ. Ha bụ:
Akụ̀ Ndị Si n’Okwu Chineke. Ihe omume nke mbụ n’agba nke a bụ okwu ga-ewe nkeji iri. Ọ ga-esi n’ọgụgụ Baịbụl izu ahụ na n’ihe osise ndị dị n’usoro ihe omume ozi anyị. Ihe omume nke abụọ bụ “Ihe Anyị Mụtara n’Okwu Chineke.” Ọ ga-ewe nkeji asatọ. Ọ ga-abụ ajụjụ na azịza si n’ebe a gụrụ na Baịbụl n’izu ahụ. Nke na-esochi ya bụ ọgụgụ Baịbụl dịịrị izu nke ga-ewe nkeji anọ.
Mụtakwuo Izi Ozi Ọma nke Ọma. Ọ bụ mmadụ atọ ga-eme ihe omume n’agba nke a. Onye nke mbụ ga-egosi otú e si ezi ozi ọma n’ụlọ n’ụlọ, onye nke abụọ egosi otú e si eme nletaghachi, onye nke atọ egosi otú e si eduzi ọmụmụ Baịbụl.
Otú Ndị Kraịst Si Ebi Ndụ. N’agba nke a, anyị na-amụ otú anyị ga-esi na-eme ihe Baịbụl kwuru kwa ụbọchị. Otu ihe omume dị mkpa a na-eme na ya bụ Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ. Ọ na-abụ ajụjụ na azịza.
Ụmụnna anyị nọ n’ebe niile n’ụwa na-ekwu na obi dị ha ụtọ maka otú ọmụmụ ihe ọhụrụ a si na-enyere ha aka. Otu nwanna nwoke bi n’Ọstrelia kwuru, sị: “Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ amaka. Anyị na-ahụ otú ihe ndị a na-amụ si gbasa anyị, ihe ngosi ndị a na-eme na ya na-edokwa anya. A bịa ọmụmụ ihe, tupu ị mara ihe na-emenụ, a gbasaala n’ihi na ihe ndị a na-amụ dị obere obere ma na-atọ ezigbo ụtọ, karịchaa, vidio ndị a na-ele nakwa otú ụmụaka si na-azazi ajụjụ na ya.”
Ndị okenye nọ n’otu ọgbakọ dị n’Ịtali kwuru, sị: “Anyị chọpụtara na ọmụmụ ihe a emeela ka anyị niile na-akwadebe ihe omume anyị nke ọma, ya emee ka anyị na-akụzikwa ihe nke ọma. Jehova ejirila ọmụmụ ihe a mee ka otú o si akụziri ndị ya ihe kakwuo mma. Otu onye nkwusa dị afọ iri na ise kwuru, sị: ‘Ọ na-esibu ike uche m ịdị n’ihe niile a na-amụ n’ọmụmụ ihe. Ma, ọmụmụ ihe ọhụrụ a emeela ka uche m na-adị n’ihe a na-amụ, m na-akwadozi nke ọma n’ụlọ.’”
Otu ezinụlọ bi n’Ọstria kwuru, sị: “Ọ na-esiburu ma anyị ma nwa anyị nwaanyị dị afọ iri ike ịna-akwado ihe anyị ga-aza n’ọgụgụ Baịbụl dịịrị izu. Ma ihe omume bụ́ ‘Akụ̀ Ndị Si n’Okwu Chineke’ emeela ka ọ na-adịrị anyị mfe ịza ajụjụ. Ugbu a, ọ na-atọ ma anyị ma nwa anyị nwaanyị ụtọ ịkwado ọgụgụ Baịbụl dịịrị izu. Nke ka nke bụ na nwa anyị nwaanyị na-eme nke ọma n’ọgbakọ ugbu a.”
Na Jamanị, otu onye nkwusa aha ya bụ Ines kwuru, sị: “Ọ na-eme ka m kwadebe ihe ndị a ga-amụ nke ọma ma chebara ha ezigbo echiche. O nwebeghị mgbe m metụrụla ụdị nchọnchọ m na-eme ugbu a. Mụ na Jehova dịkwa ná mma ugbu a karịa ná mbụ. Ụwa Setan na-eme ka ezigbo ike na-agwụ m. Ma, ọmụmụ ihe anyị na-eme ka m nwee ume ma nọgide na-efe Jehova.”
Ọmụmụ ihe ọhụrụ a na-atọkwa ọgbakọ ndị nọ na Sọlọmọn Aịlandz ezigbo ụtọ. Ha na-agba ezigbo mbọ ka ha na-enweta ihe ha ga-eji na-enwe ya. Ọtụtụ ọgbakọ e nwere ebe a dị n’ime ime obodo. Ha enweghị ọkụ eletrik ma ọ bụ Ịntanet. Ụmụnna ndị bi ebe ndị ahụ bụkwa ndị ọrụ ugbo. Olee otú ha si nweta ihe ha ji na-ele vidio nakwa otú ha si enweta vidio ndị a na-ele n’ọmụmụ ihe kwa ọnwa? Ụmụnna nọ n’otu ọgbakọ dị n’agwaetiti Malaịta kpebiri na ha ga-agbakọ aka na-ere akị bekee kpọrọ akpọ. Ha nyere ọgbakọ ego ha retara ka e jiri ya zụta ihe e ji ele vidio ụdị nke na-eji ikike anyanwụ arụ ọrụ. Iji nweta vidio ndị a na-ele n’ọmụmụ ihe, ha na-eziga ụmụnna ka ha na-aga ebe ka nso e nwere Ịntanet danloduo vidio ndị ahụ. Ha danloduo ha, ha ekesaara ya ụmụnna ndị ọzọ nọ n’ọgbakọ.
Otu Nwanna nọ n’Amerịka kwuru, sị: “M na-aka aghọta ihe ma m na-ele ya na vidio nakwa na foto karịa ịgụ ya agụ. Kemgbe afọ iri anọ ugbu a, ịgụ ihe na-abụrụ m ọgụ na mgba. Tupu mụ agụọ ihe ghọta ya ma nwee ike ịkọwara ya onye ọzọ, m ga-agụ ya ihe karịrị otu ugboro. Ọ bụ ya mere m ji na-ekele Òtù Na-achị Isi maka vidio na foto ndị anyị ji amụ ihe n’ọmụmụ ihe ọhụrụ a. Vidio ndị ahụ e ji akọwa ihe akwụkwọ Baịbụl ọ bụla na-ekwu, mara ezigbo mma. Foto ndị na-adị n’akwụkwọ usoro ihe omume ozi anyị bụ nnọọ ụdị ihe m chọrọ. O doro anya na Jehova na-agọzi mgbalị unu n’ihe a unu meere ndị ya. Unu emeela.”
OZI ANYỊ NA OTÚ ANYỊ SI EBI NDỤ​—ỤZỌ ỌHỤRỤ ANYỊ SI AMỤ IHE
IHE MERE E JI ENWE YA Ọ na-enyere anyị aka ịghọtakwu Okwu Chineke​—2 Tim. 2:15
ISI IHE DỊ NA YA A na-egosi vidio, nwee ihe osise ndị na-akọwa ihe a na-amụ, na ebe e nwere ike ide azịza ajụjụ ndị a jụrụ
IHE MERE E JI ENWE YA Iji nyere anyị aka ịkwadebe otú anyị ga-esi zie ozi ọma nke ọma​—2 Tim. 4:5
ISI IHE DỊ NA YA A na-egosi vidio, na-emekwa ihe ngosi ndị ga-enyere anyị aka ịma otú anyị ga-esi ezi ozi ọma, eme nletaghachi, ma na-eduzi ọmụmụ Baịbụl
IHE MERE E JI ENWE YA Ọ na-enyere anyị aka ịmata otú anyị ga-esi na-eme ihe Baịbụl kwuru kwa ụbọchị​—1 Kọr. 10:31
ISI IHE DỊ NA YA A na-egosi vidio ndị si n’Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova. A na-enwekwa Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ. Ọ na-abụ n’ụdị ajụjụ na azịza